Dawladda Jabuuti Oo Dadka Isticmaala Baraha Bulshada U Digtay, Kana Hadashay Xadhiga Wasiirkii Diinta iyo Maayarkii Hore Ee Jabuuti |
Dawladda Jabuuti Oo Dadka Isticmaala Baraha Bulshada U Digtay, Kana Hadashay Xadhiga Wasiirkii Diinta iyo Maayarkii Hore Ee Jabuuti
Jabuuti(GNN)- Dowladda Djibouti ayaa Arbacadii xabsiga dhigtay wasiirkii hore ee Diinta iyo Awqaafta Xaamud Cabdi Suldaan oo dhawaan ku dhaawacmay rabshadihii ka dhacay Djibouti. Waxay dawladdu sheegtay inuu mushahar dawladeed qaadan jiray oo aanay ogayn goor uu mucaarad noqday. Dadka qaar ayaa dawladdu sheegtay in loo xidhay qoraallo ama isticmaalka baraha bulshadu ku xidhiidho ee Internet-ka.
Afhayeenka dallada Mucaaradka ah ee USN Daahir Axmed Faarax, ayaa VOA u sheegay in Xaamud ay ciidamadu ka kaxeysteen iridka hore ee cisbitaalka markii uu ka soo baxay. Wuxuu sheegay in ciidamadu maalmo ku sugnaayeen irridda cisbitaalka loona diiday ehelada bookhan lahayd “Wasiirkii diinta iyo awqaafta isla ciimadii rasaasta ay ku dhufteen uu cisbitaalka u galay ayaa markii uu sidaa uga soo baxay Dhakhtarka kaxaystay, waxay hor geeyeen xaakanka oo xabsiga dhexe u taxaabay. Ma jiro wax dambi ah oo aanu ku ogayn. Siyaaraddii dadka lagu xasuuqay ayaad ka dambeysay ayaa lagu haystaa ayaa nagu maqaale ah, taasna wax dambi ah oo uu ku lahaa ma ogin, siyaarada beel baa dhigatay, beeshana wuu ka dhashay,” ayuu yidhi Afhayeenka Mucaaradka.
Waxa uu sheegay inay ka walaacsan yhn xaaladdiisa caafimaad madaama weli aanu bogsan oo uu baahan yahay dhaqtar in uu arko maalin walba.
Dowladda ayaa sheegtay inay xabsiga dhigtay 32 qof oo uu ku jiro wasiirkii hore ee Arrimaha Diinta iyo Aqaafta “ Wasiirkii diinta, Maayarkii iyo umad kaleba waa la soo qaaday oo way xidhan yihiin laakiin, arrintoodu caddaaladda ayay hoos taalaa, xaakin madax bannaan baanay hor taallaa. Markaa waxa loo xidhay bannaan bax weyn oo dhawaan la dhigay iyo argagixiso, dacwadaasina waa furan tahay,” ayuu yidhi wasiirka caddaaladda Jabuuti. Wasiirka Cadaaladda ee JabuutiCali Faarax Casoowe ayaa difaacay go’aanka ay dowladdu ku xidhay Wasiirkii hore ee Awqaafta Xaamud Cabdi Suldaan iyo Duqii hore ee magaalada Jabuuti Cabdiraxmaan Maxamed Geelle iyo sodomeeyo qof oo kale oo la xidhay.
Xeer-ilaaliyaha guud ee Djibouti Maki Cumar Cabdulqaadir ayaa sheegay in dadkan la xidhay lagu so ooggey dacwado la xidhiidha rabshaddihii maalinti isniinti 21-kii December 2015 ka dhacay duleedka magaalada Djibouti gaar ahaan degmada Balbala kuwaas oo dadna ay ku naf waayeen qaar kalana ay ku dhaawacmeen. Waxa uu sidoo kale uga digay dadka isticmaala xidhiidhka bulshada ee Internet-ka inay ku faafiyaan waxyaabo ay dambi ku mudan karaan. Dadka xidhan qaarkood ayaa loo haystaa qoraallo ay ka qoreen dhacdadii Siyaaradda, taas oo dawladdu sheegtay inay buunbuuniyeen wixii dhacay. “Dadku markay isticmaalayaan Baraha Internet-ka waa inay iska ilaaliyaan inay dambiyo ku galaan,” ayuu yidhi Xeer ilaaliyaha Jabuuti oo bulshada u digayay.